Ungayikhusela njani iVidiyo yeYouTube ekuPhumleni? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayikhusela njani ividiyo ye-YouTube ukuba imiswe?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 277
Kukho iintsuku apho uxhulumaniso lwe-intanethi alukho kwicala lethu. Sizama ukubona nayiphi na ividiyo eposwe kuYouTube kodwa unxibelelwano olubi alusivumeli ukuba siqhubele phambili. Namhlanje sikuzisa iqhinga elilula kodwa elisebenzayo onokujonga ngalo iividiyo zeli qonga ngaphandle kweziphazamiso ngaphandle kokunqumama.
I-YouTube lelona qonga lidumileyo nelithandwayo okwangoku. Izigidi zabasebenzisi bayayisebenzisa kwihlabathi liphela. Ukuba ukhe wazama ukubukela ividiyo kwesi sicelo kodwa i-intanethi ayikuvumeli Nika ingqalelo kwezi ngcebiso zilandelayo ezinokuba luncedo olukhulu kuwe.
Kufuneka wenze ntoni xa i-intanethi icotha?
Ukuba kukho utshaba olucacileyo lwe-YouTube, kukungabikho kwe-intanethi ngokuchanekileyo. Ngokuqinisekileyo zininzi iindlela zokubona umxholo kuleqonga ngaphandle kokuba uqhagamshelwe kwinethiwekhi, umzekelo uguqulelo lwePremiyamu yeYouTube, kodwa ayingabo bonke abanethuba lokuhlawula umrhumo.
Ngaphandle kwento yokuba iYouTube isebenza ikakhulu kwi-intanethi, kukho indlela elula yokubukela iividiyo zethu xa unxibelelwano lucotha kakhulu. Kuyinyani ukuba ayingabo bonke abasebenzisi abanokuxhomekeka kunxibelelwano olufanelekileyo lwe-intanethi iiyure ezingama-24 ngosuku.
Eyona nto unokuyenza xa i-intanethi icotha kakhulu kwaye ufuna ukonwabela ividiyo kwi-YouTube nqumamanjengokuba uyifunda. Misa ividiyo, ulinde imizuzu embalwa. Oko kulula uya kuba nakho ukuvelisa umxholo ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokuphazamiseka.
Amanyathelo okubukela ividiyo ngaphandle kweziphazamiso kwiYouTube
Uninzi lwabasebenzisi baye babandezeleka xa i-intanethi icotha kwaye isivumela ukuba sibone nayiphi na ividiyo ethunyelwe kwiqonga le-YouTube. Kukho iqhinga elinokusebenza kwezi meko kwaye ibandakanya ukunqumama ividiyo imizuzu embalwa ngelixa igqibezela ukulayisha ngokupheleleyo.
Ngokuqinisekileyo ayisona sisombululo sisiso kwimeko, kodwa iya kusinceda siyibone ividiyo epheleleyo, kwaye oko ekugqibeleni yinjongo yethu ephambili. Awusayi kuphinda uhlupheke xa ubona ukuba ividiyo ikhubazekile ngalo lonke ixesha. Ngeli qhinga lilula uya kuyisombulula ingxaki:
Vula iqonga I-Youtube evela kwisicelo esiselfowuni okanye ikhompyuter
Iindawo ividiyo ofuna ukuyidlala
Ngokukhawuleza xa ividiyo iqala ukudlala Kuya kufuneka unqumame imizuzwana embalwa okanye imizuzu.
Espera ukuba ividiyo igqibe ukulayisha ngokupheleleyo
Ngaba uhlakaniphile? Ngoku yenza Cofa kwiqhosha lokudlala Kwaye uya kuba nakho ukonwabela ividiyo yakho ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokuphazamiseka okanye ukunqumama.
Le yenye yeendlela ezininzi onokukhetha kuzo Kuya kufuneka sibukele iividiyo xa i-intanethi icotha kakhulu. Enye into enokuthi isebenze kukukhuphela ividiyo kwaye uyigcine kwiPC yethu. Ngale ndlela xa sifuna ukuvelisa kwakhona singayenza ngaphandle kokuba sidityaniswe kwi-intanethi.
Zininzi khuphela amaphepha ezinokukunceda ukhuphele iifayile ezithunyelwe kuYouTube ngokukhawuleza kwaye simahla.
1 Kufuneka wenze ntoni xa i-intanethi icotha?
2 Amanyathelo okubukela ividiyo ngaphandle kweziphazamiso kwiYouTube
Funda indlela yokuphumelela ngonqakrazo oluphuma kwiPinterest
Utshintsha njani igama lomsebenzisi kwi-Twitter?